Fosil na-ebupụta ụdị smartwatch ọhụrụ abụọ: Q Wander na Q Marshal | Akụkọ akụrụngwa
Fosil na-ebupụta ụdị smartwatch ọhụrụ abụọ: Q Wander na Q Marshal
Fossil, onye na-eme elekere elekere anya, kpebiri na njedebe nke afọ gara aga itinye isi nke ụwa elekere smart na tupu ngwụcha nke nkeji mbụ ọ malitere ụdị mbụ na ahịa. Companylọ ọrụ ahụ kwupụtara na ihe Q dị ugbua nwere ụdị ọhụrụ abụọ: Wander na Marshal iji mezue ụlọ ọrụ nke smartwatches. Modelsdị ndị a dị site na ebe nrụọrụ weebụ ya kemgbe ụnyaahụ. Modelsdị abụọ a na-ejikwa gam akporo Wear, ya mere site na ngwa kwekọrọ na ha kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na ụdị iPhone ndị iOS 8.x na Android 4.4 jikwaa ma ọ bụ karịa.
Dị abụọ ahụ na-enye anyị ihe ngosi 45 mm, yana ihuenyo mmetụ aka, okwu nchara na ndị na-agbanwe agbanwe. Nchaji usoro bụ site itinye n'ọkwa, dị ka ọtụtụ nke ọnụ na ahịa. Iji mezuo ọtụtụ eriri dị na Fosil siri ike amalitela ụdị ọhụrụ nke ígwè, silicone na nchara.
Ekele maka iji gam akporo Wear dị ka sistemụ arụmọrụ, ndị ọrụ nwere ike ịnata ọkwa ma soro ha rụọ ọrụ (ọbụlagodi na ngwanrọ gam akporo) yana inwe ike ịgbakwunye ihu nche dị iche iche. Ha na-enye gị ohere nyochaa ọrụ na dakọtara na Google Fit, N'okpuru Armor na Jawbone nlekota ngwa. Site na ihuenyo ngwaọrụ anyị nwere ike ịzaghachi ozi ozugbo site na iji iwu olu.
Modelsdị abụọ ahụ, nke m kwuru n'elu dị ugbu a na ahịa, anyị nwere ike ịzụta ha maka $ 295, ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa na-atụle ihe owuwu ụlọ na ọrụ niile ha na-enye anyị. Modelsdị abụọ a sonyere ndị ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a n'ime Q ma etinyekwa ya n'ime ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nke ga-enyere anyị aka nyochaa ọrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Fosil na-ebupụta ụdị smartwatch ọhụrụ abụọ: Q Wander na Q Marshal
Ezinụlọ Google Nexus ga-apụ n'anya n'afọ a
Ndị a bụ ụfọdụ akụkọ kachasị mkpa anyị nwere ike ịhụ na IFA 2016